Mai Chibwe VekwaZimuto: Kudanana nomunhu ane mari iwe usina.
Kudanana nomunhu ane mari iwe usina.
Kudanana nomunhu ane mari chero ari murume kana mukadzi, chinhu chinoda kuti utange wafunga usati wachiita. Mari chinhu chinopokanisa vanhu vakawanda mumhuri, muushamwari, nomurudo, zvokuti ukangopinda munyaya yacho usingahwisisi mamirire akaita zvinhu, unozvikanganisira upenyu hwako.
Munhu ane mari haanetsi kuona. Vakawanda havavanzi mari yavo. Mari inoonekwa pazvinhu zvakawanda zvinoti zvipfekwa, imba, zvinhu zvemumba, mota, zvipfuwo zvepamusha, purazi, basa raanoita. Kana uchisangana nomufumi wausingazvi, unokwanisa kukasira kuona kuti uyi munhu ane mari. Anozosara okunyenga iwe watomupa chigaro kare.
Murume ane mari
Kunyengwa nomurume ane mari chinhu chinodiwa nevakadzi vakawanda. Murume ane mari haanetseki kuwana mukadzi wekuroora, zvichireva kuti kune vakawanda vanoona sokuti kuroogwa nomurume ane marii yake kare chinhu chinodadisa. Vana vanokura zvakanaka uye iye mukadzi anohwa ari mambokadzi pamba pake nokuti vanhu vemumhuri vanenge vachizokumbira zvinhu kwake. Kumunhukadzi, chinhu chikuru muupenyu kuva nomusha wakatsiga. Mari inoonekwa sokuti intsgisa musha. Munyika dzakawanda vakadzi vanozikamwa kuti vanoda pane mari. Murume akangomunyenga chete iye fungwa dzake dzatove kumakore anouya ozvitarisa achizviona ariye mukadzi wemunhu uyu, mai vevana vake, mukadzi waanovinga kumba achizoturira nhamo dzake dzepamoyo.
Chinonetsa pakunyengwa apa mukadzi haazivi kuti sei murume uyu amunyenga. Pane zvakawandaa zvinkonzera kutimurume anyenge mukadzi:
1 Murume anonyenga mukadzi nokuti vangosanganawo havo asi havazivani saka Havana nyaya dzokutaura dzakawanda. Kana nyaya dzapera vasisina zvokutaura murume kazhinji anotanga kubvunza nezvokutimukadzi ane murume here uye vari papi. Mukadziwo kana aona munhu anotaridza kumufarira, anorerusa hana zvokuti murume akangwara anoramba achitaura nezvezvo opedzisira anyenga. Mukadzi angaramba hake ipapo asi anokwanisa kupa murume uyu nhamba dzake dzefoni, vozopedzisa nyaya dzavo rimwe zuva.
2 Murume anoona mukadzi aanofunga kuti anoyevedza kutarisa obva ada kumunyenga. Zvinoitika kuti vakadzi vakawanda vanoyevedza varume kutarisa havatozivi kuti ndizvo zvavari. Anotoshamisikawo kuti munhu ane mari yakawanda kudai ari kumunyenga zvaita sei? Uku murume anenge atoona kunaka kwemukadzi obva amuda ofunga kunaka kuchaita vana vake kana adanana nomunhu wakadai.
3 Murume anokwanisazve kunge ari kure nokumusha kwake asi achida munhu wekuvata naye musi iwoyo. Akasangana nomukadzi anomunyemwererera anobva afunga kuti angangokwanisa kuvata naya obva amunyenga pavasangana ipapo. Mukadzi haangazivi kuti murume ari kumunyenga zvaita sei kusvika kwapera nguva vachidanana.
4 Pamwezve anenge achingotamba hake asina kana basa nezvaari kuita. Munhu ane mari munhu ajaira kungoungganigwa nevanhukadzi zvokuti anongotamba navo.
Murume ane mari akakunyenga kazhinji anokasira kutanga ahwsisa kuti iwe nemari muri papi. Kana kwenyu kusina mari, zvinokwanisawo kumunnetsa kuziva kuti uri kumuda iye here kana kuti unoda mari yake. Ngatisakangamwa kuti rudzi gwedu isu vanukadzi tikaona mari tinoita senhunzi panyama yakaora, kuita yokuteverera. Murume ane mari haashai vakadzi vanomuda vakawanda.
Akakuroora anokuroora achioziva kuti zvemari hauzvihwisisi saka mumba menyu ndiye achatarisa mafambire emari. Izvi zvinoreva kuti iwe unomirra kupiwa mari chero yaada kukupa. Inkwanisa kunge yakkawannda hayo asi ndeyake iwe basa rako kushandisa yawapiwa.
Vayavo vanokuona vanoona sokuti wakamudira mari yake saka kazhinji vanokuongorora maitire ako vokufungira twakawanda. Ukuzve vakadzi vaya vanga vachitevera murume uyu havaregi kutevera kana akuroora. Zvinoreva kuti iye murume anofanira kuva munhu akarurama kuti asaita upombwe. Kune vamwe vanongoda kuziva kuti vakambovata naye chero vachiziva kuti hapana chavo pamunu uyu. Iwe somukadzi wake une basa rakawanda kupfuura vamwe, pakuchengeta murume wako pane zvese. Ipapa panokunetsa kana ukasakasira kuhwissa SOCIAL MAKEUP yomurume wako.
Mukadzi ane Mari:
Kunyenga mukadzi ane mari kana akazvarigwa mumari hakunetsii uye zvinoitika kakawanda. Tinozviona kutimukadzi ane mari yake yaari kuzvisandira kana kuti yevabereki vake yaanokwanisa kukumbira kana aita dambudziko, anokwanisa kudanana nomukomana anobva kumhuri isina mari uye iye asinawo mari. Anokwanisa kunge asingatoshandi pane imwe nguva. Ndiko unohwa vanotsoropodza voti RUDO IBOFU kureva kuti havafari kuti chiitiko chaitika.
Mukadzi wakaai kana ada murume wake hazvimunetsi asi hama dzake dzinkwanisa kugara dzakappindir munyaya yake kuda kuonekwa kuti ndivo vaari kuchengeta mwana wavo nokuti murume murombo. Pane vamwe vanoti kana pakaitika horodhey toti ye Easter kana Kisimisi. Unoona hama dzomukadzi dzasvika pamusha paanogara pane zviimba zviviri zveROUND zvisina mawhindo, pazhe pane muti wemupirikisi newemumengho.pamusha pasara huku shanu chete. Pakusvika kwavo vanouya nemota mbiri kana nhatu. Vanozovata pamba pemwana wamai vavo vasinei nokuti murume wake murombo.
Zvinoitika kuti vamwe varume vanotanga kuzvikombeya nehama dzomukadzi voona kuti pasiyana, votadza kugadzikana hana nazvo. Unoona vamwe voda zvokuchengera mukadzi kufunga kuti angangotogwa noumwe murume ane mari. Zvinogozhera murume murombo kuroora mukadzi ane mari pane mukadzi murombo kuroogwa nomurume ane mari.
Kana wadanana nomurrume/mukadzi ane mmari, iwe usina, tauriranai nenyaya iyi mubudirane pachenna kuti muri papi nokuti muasadaro, musi wamunotukana munokwanisa kupana mashoko anogwadza.
“Ndakakuwana uri rombe risina kana chinhu ndikakuda wakadaro hino nhasi wava kundibata sewakangamwa. “
“Haundidi iwe, pano wakavinga mari dzangu. Kwenyu wange usingatombozivi kuti chinohi sutu chii.”
Tauriranai machine mukana wekurambana, mobvumirana kuti rudo gwenyu gunobva papi uye muri kuendepi nago. Mari chinhu chinokonzera zvakawanda muupenyu, zvese nhamo nomufaro. Hapana chakaipa pakudanana nomunu ane mari, asi kungoti hwisisa zvauri kuita usati wadanana naye. Zivazve uti pane vakawanda vauchakwikwidzana navo saka panda waagwinya. Tiri kuti ita zvinhu zvako wakasvinura maziso.
Posted by Mai E Chibwe at 13:49
Kana usingadi mimba
Kisimisi yakanaka kwamuri mese!!!
Kuvengana nehama dzemurume/mukadzi